चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, ३ जनाको मृत्यु
काठमाडौं, १८ असार । नेपालमा भूकम्प आउने क्रम नरोकिरहेका बेला छिमेकी देश चीनमा शुक्रबार शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पमा परी ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने, २० जना घाइते भएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका...
इन्जिन फेल भएर वायुसेनाको विमान दुर्घटना, १४२ जनाको मृत्यु
मेदान, १७ असार । गत मङ्गलबार इन्डोनेसियाली वायुसेनाको एक विमान इन्जिन फेल भएका कारण भीषण दुर्घटना परेको जनाइएको छ । यस दुर्घटनाबाट १४२ व्यक्ति ज्यान गुमाएका छन् । इन्जिन फेल भएकाले नै १४२ व्यक्तिले...
फिलिपिन्समा डुंगा पल्टिँदा ३६ जनाको मृत्यु, १९ वेपत्ता
मनिला, १७ असार । मध्य फिलिपिन्समा बिहीबार भएको एक यात्रुबाहक डुङ्गा दुर्घटनामा कम्तीमा ३६ व्यक्तिको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सो डुङ्गामा करिब २०० व्यक्ति सवार रहेका जनाइएको छ । ओर्मोक सहरबाट किम...
५ महिने बच्चालाई दूध दिइरहेकी आमामाथि सेनाले गर्‍यो बलात्कार, बलात्कारपछि जिउँदै जलाइयो
काठमाडौं, १७ असार । दक्षिण सूडानमा जारी सशस्त्र संघर्ष नयाँ बाटोमा प्रवेश गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रको एक नयाँ रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ की दक्षिण सूडानमा सैन्य बलहरुले महिलाहरुको अस्मिता हरण गरेका छन्, उनीहरुसँग...
पहिरोबाट दार्जिलिङमा २१ जनाको मृत्यु
कोलकता, १६ असार । चियाका लागि प्रसिद्ध भारतीय सहर दार्जिलिङमा भारी वर्षापछि आएको पहिरोमा परी कम्तीमा २१ व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार छ । सो पहिरोमा परी अझै पनि कैयौं व्यक्ति हराइरहेको प्रहरीले बुधबार जानकारी...
सैनिक विमान दुर्घटनामा १४२ जनाको मृत्यु
इन्डोनेसिया, १६ असार । इन्डोनेसियाली वायुसेनाको एक विमान मङ्गलबार दुर्घटनाग्रस्त हुदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १४२ पुगेको छ । सो विमान उडेको केही समयमै एक प्रमुख नगरमा दुर्घटना भएको थियो । विमान दुर्घटनापछि विस्फोट भएको...
हाल प्रति महिलाले १.१९ शिशु जन्माउँछन् !
काठमाडौं, १६ असार । सिङ्गापुरको जनता विश्वका अन्य कुनै पनि समाजभन्दा द्रुत रूपमा प्रौढ हुँदै गइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ली सिङ लुङले मङ्गलबार यसले अर्थतन्त्र तथा प्रतिरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । त्रिसट्ठी...
उडेको दुई मिनेटमै सेनाको विमान दुर्घटना, दुर्घटनामा सेनाका कर्णेलसहित ११६ जनाको मृत्यु
काठमाडौं, १५ असार । इन्डोनेसियाको वायुसेनाको एक विमान मङ्गलबार उडेको केही समयमै एक प्रमुख नगरमा दुर्घटना भई विस्फोट हुँदा कम्तीमा ११६ व्यक्तिको मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सुमात्रा द्वीपको २० लाख...
नेपालपछि पाकिस्तानमा गयो शक्तिशाली भूकम्प
इस्लामाबाद, १५ असार । पूर्वी र उत्तरपश्चिमी पाकिस्तानमा मङ्गलबार बिहान सबेरै भूकम्प गएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सो भूकम्प ५.७ रेक्टर स्केलको मापन गरिएको बताइएको छ । सो भूकम्प स्थानीय समयाअनुसार मङ्गलबार बिहान...
एयरपोर्टबाट उडेको सैनिक विमान मानव बस्तीमा दुर्घटना, ३० जनाको मृत्यु
काठमाडौं, १५ असार । एयरपोर्टबाट उडेको केही समयमै एक सैनिक विमान दुर्घटनामा परेको छ । विमान दुर्घटनामा ३० जनाको मृत्यु भएको छ । इन्डोनेसिया एयर फोर्सको हर्कुलस सी–१३० सैनिक विमान सुमात्रा द्वीपको मानव बस्तीमा...
नेपालपछि भारतमा भूकम्पको ठूलो धक्का
काठमाडौं, १५ असार । भारतमा मंगलबार भूकम्पको ठूलो धक्का महसुस गरिएको छ । नेपालमा भूकम्प आउने क्रम नरोकिरहेका बेला भारतको कश्मीर राज्यमा भूकम्पको ठूलो धक्का महसुस गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । कश्मीरको घाटीलाई...
१९३ यात्रु बोकेको एयर ड्रीमलाइनरको विमान दुर्घटना
काठमाडौं, १५ असार । १९३ याुत्र बोकेको एक विमान मंगलबार विहानै दुर्घटनामा परेको छ । एयरमैक्सिको ड्रीमलाइनरको यात्रुवहाक विमान इन्जिनमा आगो लागेर दुर्घटनामा परेको हो । यद्यपी विमानमा सवार यात्रुलाई सकुशल बचाउन सकिएको बताइएको...
« 1 … 346 347 348 349 350 … 403 »
प्रधानमन्त्रीको अर्थपूर्ण अभिव्यक्तिबाट यति धेरै आतंकित किन ?
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागपछि ओलीले थाले गम्भीर परामर्श
ओलीको अस्वभाविक स्वभावका कारण नेकपामा देखियो गम्भिर मोड
असारभित्रै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा वा अपदस्त गराउने तयारी
ओलीको विकल्प मात्रै ओली
काठमाडौं बस्ने संक्रमितले गाउँको ठेगाना टिपाउँदा हैरान
स्थायी समिति सकिनासाथ केही मन्त्रीसहित नेकपा महासचिवलगायतसँग ओलीको गोप्य बैठक
२५ जिल्लाका ८२ प्रहरीमा कोरोना संक्रमण, ४५ निको भए
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छुट्टै वार्तापछि युवा नेता भट्टराई यसो भन्छन्
बालुवाटारमा तमासा भएको युवा नेता गगन थापाको टिप्पणी
नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य छन्त्यालको निधन
थप एक जनासँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३० पुग्यो
पूर्वसूचनामन्त्री बाँस्कोटाको घरमा विस्फोट गराएको आरोपमा एक पक्राउ
बुधबार स्थायी समिति बैठकअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको छुट्टै परामर्शको अर्थ